Akhriso: Jawaabta Guddiga Doorashada madaxtinimo ee Jubbaland ay siiyeen wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya - Bandhiga Media
Akhriso: Jawaabta Guddiga Doorashada madaxtinimo ee Jubbaland ay siiyeen wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya
Press room August 18, 2019
War qoraal ah oo ka soo baxay Guddiga doorashada madaxtinimo ee Jubbaland ayaa looga jawaabay qoraal u badnaa dhaliil oo doorashada Jubbaland ay ka soo saareen wakiilada Beesha Caalamka ka soo saartay doorashada socota ee Jubbaland.
Guddiga Doorashada Jubbaland ayaa waxa ay ku sheegeen warkooda qoraalka ah in Doorashada Madaxweynaha ay ku dhicin doonto waqtigii loogu tala galay,isla markaana aysan jirin doonin dib u dhac.
Guddiga ayaa sidoo kale ku adkeestay in haatan la marayo meelihii ugu dambeeyay ee arrimaha Doorashada lana qaaday 7 tallaabo oo lagama maarmaan u ah dib u habeynta hannaanka doorashada.
Guddiga ayaa qoraalkooda ku xusay in la fuliyay dhamaan shuruudihii lagu xiray ee la xiriiray Dastuurka dalka iyo hannaanka doorashada Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland.
Xalay ayey aheyd markii wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Amb James Swan uu soo saaray qoraal uu ku sheegay in aanu aqoonsanaan doonin Natiijo kasta oo ka soo baxda Doorashada Jubbaland hadii aan si dhab ah loo fulin qaar kamid ah qodobadii uu ka codsaday Guddiga Doorashada.
Daraasad: Dhibaatada ugu badan ee Baraha Bulshada waxaa la kulma Gabdhaha marka la barbar dhigo Wiilasha